Okwu Iwu Nke Top na Blogging | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga, otu n'ime ndị ahịa anyị dere nnukwu blog post ha na-achọkwa ezigbo onyonyo iji gosipụta ya. Ha jiri Google Image Search, chọta onyogho enwetara dị ka nke enweghị eze, tinye ya na post.
N'ime ụbọchị ole na ole, otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe osise ngwaahịa kpọtụrụ ha wee nye ha ụgwọ maka $ 3,000 iji kwụọ ụgwọ maka iji ihe onyonyo wee zere nsogbu iwu metụtara itinye akwụkwọ maka mmebi iwu nwebisiinka. Ọ bụ okwu ahụ mere ka anyị debanye aha OnyinyePita maka ọnụahịa na ịdị mma dị elu ihe oyiyi enweghị eze.
Ma ị na-azụ ahịa na blọọgụ ma ọ bụ, nwee naanị blog nke ọ bụla, nsogbu anaghị agbanwe agbanwe. N'ezie, site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịkọwa na ịnụ ọkụ n'obi ikpe ikpe nwere ike bụrụ ihe na-eme ihe ike karị na ntaramahụhụ ọbụlagodi. Isi okwu 3 na iwu nke ndi na-ede blọgụ na-abanye:
Nkwupụta Ziri Ezi - iji ọrụ ndị iwu onye nwebisiinka chebere na-enweghị ikike, na-emebi ụfọdụ ikike ndị enyere ikike nwebisiinka, dị ka ikike ịmegharị, kesaa, gosipụta ma ọ bụ rụọ ọrụ echedoro, ma ọ bụ ịrụ ọrụ ndị ọzọ.
Nkatọ - nkwukọrịta okwu ụgha nke na-emebi aha mmadụ, azụmaahịa, ngwaahịa, otu, gọọmentị, okpukpe, ma ọ bụ mba. Iji mebie aha mmadụ, nkwupụta ga-abụrịrị ụgha ma bụrụ onye e meere onye ọzọ karịa onye ahụ aha ya mebiri aha ya.
CAN-SPAM imebi - CAN-SPAM bụ United States ụkpụrụ ekpuchi azụmahịa ozi email. Imebi iwu nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ruru $ 16,000 ọ bụla! Gụọ: Kedu ihe bụ CAN-SPAM Act?
Ihe omuma a, Iwu Blog 101, si na Monder Law Group dere ndị ahụ nsogbu kachasị na iwu jikọtara na ịde blọgụ yana otu esi egbochi ha.
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọ anyị maka OnyinyePita na post a.
Tags: ịde blọgụịde blọgụ legalitiesnwere ike-spamdetuo ịda iwunkatọdmcaiwuiwuụgwọspam
Jul 15, 2016 na 1:56 PM
Daalụ maka edemede a! Ihe omuma bara uru na nke zuru ezu maka ndi na-ezube ịmalite ịde blọgụ, ọ bụghị naanị. Ma mụ onwe m, ọ dị mkpa ịmara iwu ọbụlagodi na okirikiri bụ ihe ọhụrụ nye gị ('Ignorantia non est argumentum')